ဝမ်းလျှောခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ငါးနှစ်အောက် ကလေးများတွင် ဝမ်းလျှောခြင်းကြောင့် ဆေးရုံတင်ကုသရမှု ၄၀%နီးပါးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်အား အီလက်ထရွန်မိုက်ခရိုဂရပ် ဖြင့် တွေ့မြင်ရပုံ
ကူးစက်ရောဂါများ၊ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ
အူလှုပ်ရှားမှု နည်းပါးခြင်း၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း
ကူးစက်ရောဂါများ (ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယား၊ ကပ်ပါးကောင်)
ညစ်ညမ်းသော အစားအစာ သို့မဟုတ် ရေ
လက်ဆေးခြင်း၊ ရိုတာဗိုင်းရပ် (စ်)ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ မိခင်နို့တိုက်ခြင်း
ပါးစပ်မှ ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း၊ ဇင့် တိုက်ကျွေးခြင်း
≈၂.၄ ဘီလီယံ (၂၀၁၅)
၁.၃ သန်း (၂၀၁၅)
ဝမ်းလျှောခြင်း (ဂရိ စကားလုံး διάρροια မှဆင်းသက်လာပြီး၊ "စီးဆင်းသည်"ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်) ဝမ်းလျှောခြင်း ဟု လည်းစာလုံးပေါင်းသည်။ ဝမ်းလျှောခြင်း ဟူသည် တစ်နေ့လျှင် သုံးကြိမ် သို့မဟုတ် ၎င်းထက်ပို၍ ပျော့ပျော့ သို့မဟုတ် အရည်ဖြစ်သော ဝမ်းသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ၎င်းမှာ သေဆုံးမှုဖြစ်လေ့ရှိသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအဝှမ်းတွင် မွေးကင်းစကလေးငယ်များသေဆုံးမှု အဖြစ်အများဆုံးတွင် ဒုတိယမြောက် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဝမ်းလျှောခြင်းကြောင့် အရည်များ ဆုံးရှုံးခြင်းသည် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း နှင့် ဓာတ်သဘောပစ္စည်းများ မမျှတခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ၂၀၀၉ တွင် ဝမ်းလျှောခြင်းမှ အသက် ၅ နှစ်နှင့် အထက်လူပေါင်း ၁.၁ မီလီယံ နှင့် အသက် ၅ နှစ်အောက်ကလေးပေါင်း ၁.၅ မီလီယံ ကို သေဆုံးမှု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သော ၂၅ နှစ်အတွင်း ဓာတ်ဆားရည်များ နှင့် ဇင့်ဆေးပြားများ သည် ကလေးပေါင်း ၅၀ မီလီယံကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည် ဟုခန့်မှန်းရသည်။
၈ ခွဲထုတ်ရမည့် ရောဂါသတ်မှတ်မှုများ
၁၉ လှုပ်ရှားမှုကို ဆန့်ကျင်သောဆေးများ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ မှ ဝမ်းလျှောခြင်းကို တစ်နေ့လျှင် သုံးကြိမ် သို့မဟုတ် ၎င်း နှင့်အထက် ပျော့ပျော့ သို့မဟုတ် အရည်ဖြစ်သော ဝမ်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် လူတစ်ယောက်အတွက် သူ၏ပုံမှန်ထက်ပို၍ ဝမ်းသွားခြင်း အဖြစ် ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ထားသည်။
စိမ့်ထုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် ဝမ်းလျှောခြင်း ဟူသည်မှာ တစိမ့်စိမ့် စိမ့်ထွက်နေမှု များလာခြင်း သို့မဟုတ် စုပ်ယူမှုတွင် ပိတ်ဆို့မှုတခုခု ရှိနေခြင်း ဟုအဓိပ္ပာယ် ရသည်။ ယင်းတွင် အနည်းငယ်မျှမှ လုံးဝ ပုံစံအရ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိပေ။ ထို ဝမ်းအရမ်းသွားခြင်း ပုံစံ အဖြစ်စေဆုံး အကြောင်းရင်းမှာ အနုတ်ဓာတ်ပစ္စည်းများ ထုတ်ရန်၊ အထူးသဖြင့် ကလိုရိုက် ဓာတ်ပစ္စည်းများတို့ကို လှုံ့ဆော်သော ကာလဝမ်းအဆိပ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝမ်းခေါင်းအတွင်း ဓာတ်အား မျှတမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ဆိုဒီယမ်အား ရေနှင့်အတူ သယ်ဆောင်လာရသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဝမ်းလျှောခြင်း ပုံစံမျိုးတွင် အစားမစားရသော အချိန်တွင်းတောင်မှ အူအတွင်းရှိ အရည်ထုတ်မှုတို့သည် သွေးရည်ကြည်နှင့် တွန်းအားတူ နေမည်။ ပါးစပ်မှ အစာစားမှု လုံးဝမရှိသည့်အခါ ထိုသို့ဆက်ဖြစ်နေပေမည်။
အရည်တွင်းအားကြောင့်ဖြစ်သည့် ဝမ်းလျှောခြင်းမှာ အူတွင်းသို့ ရေများ အများအပြား ဝင်လာသောအခါတွင် ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ အစာမကျေခြင်း (ဥပမာ- ပန်ကရိယ ခေါ် သရက်ရွက်ရောင်ရောဂါ သို့မဟုတ် အူနှင့်ပတ်သက်သော မျိုးရိုးလိုက်သည့်ရောဂါ) တွင် အစာများမှာ အူတွင်းကျန်ရှိနေခြင်းဖြင့် ရေကိုဆွဲယူခြင်း၏ ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည်။ အရည်တွင်းအားကြောင့်ဖြစ်သည့် ဝမ်းလျှောခြင်းသည် အရည်တွင်းအားပြောင်းလဲစေသည့် ဝမ်းနုတ်ဆေးများ ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်သည်။ (အူတွင်းသို့ ရေဆွဲသွင်းခြင်းဖြင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာအောင်ပြုသည်။) ကျန်းမာသောသူတို့တွင် မဂ္ဂနီစီယမ် သို့မဟုတ် ဗိုက်တာမင်စီ သို့မဟုတ် အစာမချေထားသော လက်တို့စ် တို့အလွန်များပြားလာလျှင် အရည်တွင်းအား ကြောင့် ဖြစ်သည့် ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်လာပြီး ဝမ်းဗိုက်တင်းဖောင်းလာမည်။ လက်တို့စ်ကို မခံနိုင်သူတစ်ဦးသည် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ ပုံမှန်ထက် ပိုမိုများပြားစွာ စားသုံးပြီးသောအခါ လက်တို့စ်ကို စုပ်ယူရာတွင် အခက်အခဲရှိနိုင်သည်။ ဖရက်တို့စ်သကြားစုပ်ယူမှုမကောင်းခြင်း ရှိသူများတွင် ဖရက်တို့စ်သကြား ပိုလျှံစွာစားသုံးခြင်း သည်လည်း ဝမ်းလျှောခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဂလူးကို့စ်သကြားပါဝင်မှုလည်းများသော ဖရက်တို့စ်သကြားများသော အစားအစာများမှာ ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပြီး ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုနည်းပါသည်။ ဆော်ဘီတော (သကြားကင်းလွတ် အစာများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိ) ကဲ့သို့ သကြားအရက်များမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် စုပ်ယူရန်ခက်ခဲပြီး ပမာဏများပြားလျှင် အရည်တွင်းအားကြောင့်ဖြစ်သည့် ဝမ်းလျှောခြင်းသို့ ဦးတည်နိုင်သည်။ ဖြစ်စေသောပစ္စည်း (ဥပမာ-နို့၊ ဆော်ဘီတော) ကိုရပ်လိုက်လျှင် အရည်တွင်းအားကြောင့်ဖြစ်သည့် ဝမ်းလျှောခြင်းလည်း ရပ်တန့်သွားသည်။
အူလှုပ်ရှားမှု နှင့်ဆက်နွယ်သည့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းသည် အူများအတွင်းသို့ အစာလျင်မြန်စွာဖြတ်သန်းမှု (အူအလွန်လှုပ်ရှားခြင်း)ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အစာအိမ်နှင့်အူ လမ်းကြောင်းမှ အစာလျင်မြန်စွာ ဖြတ်သွားလျှင် လုံလောက်သော အစာ နှင့် ရေ တို့ကို စုပ်ယူနိုင်ရန် အချိန်လုံလောက်ခြင်းမရှိပေ။ ယင်းမှာ ဗေးဂတ်စ်အကြော အားဖြတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးချိုကြောင့်အာရုံကြောပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ရာသီလာခြင်း ၏နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုး တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သိုင်းရွိုက်အလွန်အလုပ်လုပ်သောရောဂါ တွင် အူအလွန်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်စေပြီး အခြားရောဂါများကြောင့်ဝမ်းလျှောခြင်း နှင့် တခါတရံ အမှန်စင်စစ် ဝမ်းလျှောခြင်း ကို ဖြစ်စေသည်။ ဝမ်းလျှောခြင်းအား (ဝမ်းပိတ်ဆေး (လိုပီရာမိုက်) ကဲ့သို့) အူလှုပ်ရှားမှုကို ဆန့်ကျင်စေသည့် ဆေးများ ဖြင့် ကုသ နိုင်သည်။ အူအလွန်လှုပ်ရှားမှုအား အူတပိုင်းတဒေသ ဖယ်ထုတ်ထားပြီး အစာများ စုပ်ယူရန်အတွက် အချိန် လျော့နည်းစေရန် ပြုထားသည့် သူများတွင် တွေ့နိုင်သည်။
အူရောင်၍ဝမ်းလျှောခြင်း မှာ အူကို ကာရန် ထားသည့်အကျိအချွဲအလွှာ သို့မဟုတ် ဖြီးသင်သည့်ဘောင် တို့တွင် ပျက်စီးခြင်းမှဆက်လက်၍ အသားဓာတ်ပြည့်ဝသော အရည်များ ဆုံးရှုံးခြင်း နှင့် ထိုဆုံးရှုံးသွားသော အရည်များကို စုပ်ယူရန် အစွမ်းလျော့နည်းခြင်းတို့ဖြစ်လာသည်။ ထိုဝမ်းလျှောခြင်း ပုံစံတွင် အခြားဝမ်းရောဂါ သုံးမျိုးလုံးတို့၏ လက္ခဏာများ တွေ့နိုင်သည်။ ဘက်တီးရီးယား ပိုးဝင်မှုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးဝင်မှုများ၊ ကပ်ပါး ပိုးဝင်မှုများ သို့မဟုတ် အူရောင်သည့်ရောဂါကဲ့သို့ အလိုအလျောက် ကိုယ်ခံအားတိုက်သည့် ပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ တီဘီ၊ အူမကြီး ကင်ဆာ နှင့် အူမရောင်ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဝမ်းထဲတွင် သွေးမြင်ရလျှင် ဝမ်းလျှောခြင်း မဟုတ်သော်လည်း ဝမ်းကိုက် သွေးပါခြင်း ဖြစ်သည်။ သွေးမှာ အူအသားစများသို့ ဝင်ရောက်နေပြီဟူ၍ ခြေရာကောက်နိုင်သည်။ ဝမ်းကိုက်ခြင်းသည် အခြားတို့ထက် Shigella (ရှီဂဲလား) ၊ Entamoeba histolytica (အန်တမီးဘား ဟစ်တိုလိုက်တီကာ) နှင့် Salmonella (ဆယ်မွန်နဲလား) တို့၏ လက္ခဏာများဖြစ်သည်။
ဝမ်းလျှောခြင်းသည် အသက်ငါးနှစ်အောက် ကလေးများ ဖြစ်ပွားမှု၏ ၄၀% ရှိသော ရိုတာဗိုင်းရပ်ကြောင့် အစာအိမ်နှင့်အူရောင်ခြင်းကြောင့် အများဆုံးဖြစ်ရသည်။ (စာ-၁၇) သို့သော်လည်း ခရီးသွားများတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်မှုတို့မှာ လွန်ကဲနေသည်။ မှိုတောက်ခြင်းကဲ့သို့သော အဆိပ် နှင့် ဆေးဝါးများ အမျိုးစုံတို့သည်လည်း ရုတ်တရက် ဝမ်းလျှောခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ နာတာရှည် ဝမ်းလျှောခြင်းဟူသည် အူကို ထိခိုက်နေသော နာတာရှည် မကျန်းမာမှုအများအပြားတို့ တင်ပြပုံ၏ တပိုင်းတဒေသ ဖြစ်နိုင်သည်။ အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများတွင် အူမရောင်အနာ၊ အူမကြီးအနာဖြစ်ပြီးယောင်ရမ်းနာ၊ အူမရောင်မှုအသေးစား၊ အူမှအစာမချေနိုင်သောရောဂါ၊ အထိမခံနိုင်သောအူလမ်းကြောင်းရောဂါစု နှင့် သည်းခြေရည်စုပ်ယူမှု မကောင်းခြင်း တို့ပါဝင်သည်။
ရောဂါပိုးဝင်မှုကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိရာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ၊ ဘက်တီးရီးယား နှင့် ကပ်ပါးကောင်များ ပါဝင်သည်။ အရွယ်ရောက်သူများတွင် နိုရိုဗိုင်းရပ်စ်သည် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သော ဝမ်းလျှောခြင်းတွင် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သော်လည်း အသက်ငါးနှစ်အောက် ကလေးများတွင်မူ ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်သည် အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။ အဒီနိုဗိုင်းရပ်စ် ပုံစံ ၄၀ နှင့် ၄၁ နှင့် အက်စ်ထရိုဗိုင်းရပ်စ် တို့မှ ရောဂါပိုးဝင်မှု အတော်များများကို ဖြစ်စေသည်။ ကမ်ပိုင်လိုဘက်တာ ဘက်တီးရီးယားများသည် ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်လေ့ရှိသော အကြောင်းရင်းဖြစ်သော်လည်း ဆယ်မွန်နဲလား၊ ရှီဂဲလား နှင့် အချို့သော Escherichia coli (အက်စ်ချရီးရှီးရား ကိုလိုင်) (အီး ကိုလိုင်) တို့ကြောင့် ရောဂါပိုးဝင်မှုများမှာ ခဏခဏဖြစ်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် အထူးသဖြင့် မသက်ဆိုင်သော ရောဂါပိုးများအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများနှင့် ကုသမှုခံရသော သူများတွင် Clostridium difficile (ကလော့စထရီဒီယမ် ဒစ်ဖစ်စိုင်းလ်) မှထုတ်သော အဆိပ်ကြောင့် ပြင်းထန်သော ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်တတ်သည်။
ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း နှင့် metronidazole (မက်ထရိုနီဒါဇိုးလ်) ကဲ့သို့သော ဆေးဝါးများနှင့် ကုသခြင်းတို့ မပြုလျှင် နာတာရှည်ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သော ပရိုတိုဇိုအန် Giardia (ဂျီရာဒီးရာ) နှင့် Entamoeba histolytica (အန်တမီးဘားဟစ်တိုလိုက်တီကာ)တို့မှလွဲ၍ ကပ်ပါးကောင်များသည် ဝမ်းလျှောခြင်းကို ဖြစ်စေလေ့ မရှိကြပါ။ ကပ်ပါးကောင်များ နှင့် ဘက်တီးရီးယား အဆိပ် ကဲ့သို့သော အခြားရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ လည်းရှိကြ သည်။လုံလောက်သော အစားအစာ နှင့် သန့်ရှင်းသော ရေအထောက်အပံ့တို့ရှိသော ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော နေထိုင်မှုအခြေအနေများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ပြည့်စုံခြင်း မရှိသည့်သူပင် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါများမှ နေပြန်ကောင်းလာလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဖျားနာနေသော သို့မဟုတ် အာဟာရမပြည့်စုံသော သူများအတွက်တွင် ဝမ်းလျှောခြင်းမှ ပြင်းထန်သော ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုသို့ ဦးတည်သွားပြီး အသက်အန္တရာယ် ပါရှိလာနိုင်သည်။
စုပ်ယူမှုမကောင်းခြင်း သည် အူသိမ်တွင်း ချို့ယွင်းမှုများကြောင့်အများဆုံးဖြစ်ပြီး ပန်ကရိယ ခေါ် သရက်ရွက် ရောဂါများကြောင့် အစာမချေနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း အစာကို ပြည့်ဝစွာ မစုပ်ယူနိုင်သည် ကိုတွေ့ရသည်။ ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများတွင် -
အစာဓာတ်မတည့်ခြင်း နှင့် အစာဒဏ်မခံနိုင်ခြင်း (ဥပမာ- အူနှင့်ပတ်သက်သောမျိုးရိုးလိုက်သည့် ရောဂါ (ဂလူတန် ကိုမခံနိုင်ခြင်း)၊ လက်တို့စ်မခံနိုင်ခြင်း (နို့အချိုကိုမခံနိုင်ခြင်း - ဥရောပသားမဟုတ်သူများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိ)၊ ဖရက်တို့စ်သကြားစုပ်ယူမှုမကောင်းခြင်း တို့တွင် ကဲ့သို့ အင်ဇိုင်းချို့တဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အကျိအချွဲလွှာပုံမမှန်ခြင်း၊
ဗီတာမင်ဘီ၁၂ ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောသွေးအားနည်းရောဂါ (အူမှ ဗိုက်တာမင်ဘီ၁၂ မစုပ်ယူနိုင်၍ အစာချေခြင်းဆောင်ရွက်မှု ပျက်စီးခြင်း)၊
သရက်ရွက်မှထုတ်သော အရည်များ ဆုံးရှုံးခြင်း (မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်သော မွေးရာပါ သရက်ရွက်အတွင်း အရည်ကြည်အိတ်ဖြစ်ပေါ်သောရောဂါ သို့မဟုတ် သရက်ရွက်ရောင်ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်)၊
ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်စီးမှုများ - အူလမ်းကြောင်းတိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါစု (ခွဲစိတ်၍ဖယ်ထုတ်ထားသော အူလမ်းကြောင်း) နှင့် ဓာတ်ကင်ခြင်းကြောင့်ခဲသွားခြင်း (ကင်ဆာကုထုံး နှင့် ဆေးသွင်းကုထုံး တွင် သုံးသော ပစ္စည်းများ အပါအဝင် အခြားသောဆေးဝါးများ ပေးပြီးနောက်တွင် ဖြစ်လေ့ရှိ)၊
အချို့သောဆေးဝါးများ (အဆီစုပ်ယူမှုကို တားဆီးသော အော်လီစတတ် ကဲ့သို့ဆေး)။
အူမရောင်အနာတွင် နာတာရှည်သွေးဝမ်းသွားခြင်း နှင့် ရောင်ရမ်းမှုအများဆုံးမှာ စအိုလမ်းကြောင်း အနီး အူမ နောက်ဆုံးပိုင်းကိုဖြစ်သည်ဟူ၍ အမှတ်ပြုထားသည်။
အူမကြီးအနာဖြစ်ပြီးယောင်ရမ်းနာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အူမတွင်း အူလမ်းကြောင်း၏ ထင်ရှားစွာ ဘောင်ခတ်ထားသည့် အပိုင်းများကို ထိခိုက်စေပြီး အူသိမ်၏အဆုံးပိုင်းကိုလည်း ထိခိုက်လေ့ရှိသည်။
ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်စေနိုင်သော အခြားအကြောင်းရင်းမှာ အူလမ်းကြောင်းရောဂါစု (IBS) ဖြစ်ပြီး ဝမ်းသွားလျှင် ဝမ်းဗိုက်မအီမသာဖြစ်မှု သက်သာသွားခြင်း နှင့် ဝမ်းပုံမမှန်ခြင်း (ဝမ်းလျှောခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းချုပ်ခြင်း) မှာ ပြီးခဲ့သည့် ၃လကျော်မှ အနည်းဆုံး တစ်ပတ် ၃ရက် ဖြစ်သည်ဟူ၍ လာလေ့ရှိသည်။ ဝမ်းအသွားများသည်မှာ ပိုများသော IBS ၏ လက္ခဏာများအား စားသောက်မှုအလေ့ပြောင်းခြင်း၊ ပျော်ဝင်နိုင်သောအမျှင်ပါသည့် ဖြည့်စွက်စာများ နှင့်/သို့မဟုတ် ဝမ်းပိတ်ဆေး (လိုပါရမိုက်) သို့မဟုတ် ကိုဒင်း ကဲ့သို့ဆေးများပေးခြင်း တို့ပေါင်း၍ ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ကာလကြာရှည် အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ဝမ်းအရမ်းသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အူလမ်းကြောင်း သွေးကြောပိတ်ရောဂါ။ ယင်းမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ပိတ်ဆို့နေသည့် သွေးကြော များကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
အလွန်သေးငယ်သောအူမရောင်ခြင်း၊ အူလမ်းကြောင်းရောင်ရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး - ပြောင်းလဲမှုများမှာ အူမမှယူထားသော အသားစများ၏ အနုစိတ်လေ့လာစစ်ဆေးမှုများတွင်သာ တွေ့ရသည်။
သည်းခြေရည်စုပ်ယူနိုင်မှု မကောင်းခြင်း (သည်းခြေပါသည့်ဝမ်းစသွားခြင်း) တွင် အူမအတွင်းရှိ ပိုလျှံနေသော သည်းခြေရည်များမှ စိမ့်ထွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် ဝမ်းအရမ်းသွားခြင်း ဖြစ်စေသည်။
ဟော်မုန်းထုတ်နေသော အကြိတ်များ - အချို့ဟော်မုန်းများ (ဥပမာ- စီရိုတိုနင်) သည် အများအပြားထုတ်လျှင် ဝမ်းလျှောခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ (အများအားဖြင့် အကြိတ်မှ)
မွေးကင်းစကလေးများနှင့် လမ်းလျှောက်စကလေးများတွင် နာတာရှည် မပြင်းထန်သည့် ဝမ်းလျှောခြင်း သည် ထင်ရှားသော အကြောင်းရင်းမရှိဘဲ ဖြစ်တတ်ပြီး အခြားသော နာဖျားစေသည့် ဆိုးကျိုးများမရှိပေ။ ထိုအခြေအနေကို လမ်းလျှောက်စကလေး၏ ဝမ်းလျှောခြင်း ဟုခေါ်သည်။
အောက်ပါဝမ်းလျှောခြင်းပုံစံများတွင် ပိုမိုစစ်ဆေးမှုများလိုအပ်ကြောင်း ပြနိုင်သည် -
ကလေးငယ်များတွင် အတန်အသင့် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် ဝမ်းအရမ်းသွားလာလျှင်
ကြွက်တက်သကဲ့သို့မဟုတ်သော ဗိုက်နာခြင်း၊ အဖျား၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း စသည်တို့ပါလာလျှင်
အစားအစာကိုင်တွယ်သူများတွင် - အခြားသူများအားကူးစက်ရန် အလားအလာရှိ၍
ဆေးရုံများ၊ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာများ၊ သို့မဟုတ် ဘိုးဘွားနှင့် နာလန်ထရိပ်သာများ ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အသင်းများ။
ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးတွင် ဝမ်းလျှောခြင်း နှုန်းကိုလျော့ချရန် အလားအလာရှိသည်။ လက်ရှိတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရိုတာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး နှစ်မျိုးရှိသည်။ ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်၊ Shigella (ရှီဂဲလား)၊ ETEC (အီးတီအီးစီ) နှင့် ကာလဝမ်းရောဂါ ၊ ထို့ပြင် အခြားရောဂါပိုးဝင်စေသော ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများတို့၏ ကာကွယ်ဆေးအသစ်မှာ ဖော်ထုတ်ဆဲဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အသင်းများနှင့် လူမှုဝန်းကျင်များတွင် လက်ဆေးခြင်းကို တိုးမြင့်စေသည့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများမှ ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်ပွားမှုကို သိသာစွာလျော့ချခြင်းသို့ ဦးတည်ကြောင်း လေ့လာမှုများအား Cochrane (ကိုချရိန်း) ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း မှတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဝမ်းလျှောခြင်း ကိစ္စအများတွင် ဆုံးရှုံးသွားသော အရည်နှင့် ဆားများကို ပြန်ဖြည့်ခြင်းသည် တစ်ခုတည်းသော လိုအပ်သည့် ကုသမှုဖြစ်သည်။ ယင်းကို အများအားဖြင့် ပါးစပ်မှ - ဓာတ်ဆားရည်တိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုးသောကိစ္စများတွင် အကြောဆေးသွင်း၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။သုတေသနတို့မှ ဝမ်းလျှောနေစဉ်တွင် ကလေးများကို နို့ရပ်လိုက်ခြင်းသည် မည်သည့်အကျိုးမှ မရှိသဖြင့် အားပေးမှုမပြုပါ။ Loperamide (ဝမ်းပိတ်ဆေး)Imodium(အီမိုဒီရမ်)၊bismuth subsalicylate (သတ္ထုဓာတ်ဆဗ်ဆလီစိုင်လိတ်) ကဲ့သို့သောဆေးများမှာ အကျိုးရှိနိုင်သော်လည်း အချို့အခြေအနေများတွင် ယင်းတို့ကို တားမြစ်ထားသည်။
ပဋိဇီဝဆေးများ ပဋိဇီဝဆေးများသည် အချို့ရုတ်တရက် ဝမ်းလျှောခြင်း ပုံစံတို့ကို အကျိုးရှိစေသော်လည်း တိကျသော အခြေအနေတို့မှလွဲ၍ သုံးစွဲခြင်းမရှိပေ။ ပဋိဇီဝဆေးများသည် Escherichia coli O157:H7 (အက်ချရီးချီးရား ကိုလိုင်းအို၁၅၇းအိတ်ချ်ရ)တို့ဖြစ်နေသော သူများတွင် သွေးဥနီများပြိုကွဲပြီးအဆိပ်အတောက်များ သွေးထဲကျန်သည့် ရောဂါစု အန္တရာယ် တိုးလာနိုင်သည်ကို စိုးရိမ်မှုများရှိလာသည်။ အရင်းအမြစ်များဆင်းရဲသော တိုင်းပြည်များတွင် ပဋိဇီဝ တို့နှင့်ကုသခြင်းမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အထူးသဖြင့် Shigella (ရှီဂဲလား) သို့သော အချို့ဘက်တီးရီးယားများသည် ပဋိဇီဝဆေးခံနိုင်ရည် များပေါ်လာကြသည်။
သတ္ထုဓာတ်ဒြပ်ပေါင်းများ (Pepto-Bismol) (ပပ်တို-ဘစ်မော) သည် ခရီးသွားဝမ်းလျှောခြင်းတွင် အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှု အရေအတွက်ကို လျော့ချပေးသော်လည်း နာဖျားမှု၏ အတိုင်းအတာကို မလျော့ချပေ။ ထိုဒြပ်ပေါင်းများအား သွေးဝမ်း မသွားမှသာလျှင် အသုံးပြုသင့်သည်။
လှုပ်ရှားမှုကိုဆန့်ကျင်သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်သော ဝမ်းပိတ်ဆေး (loperamide) မှာ ဝမ်းလျှောချိန်ကို လျော့ချရန် အသုံးဝင်သည်။
ကိုဒင်းဖော့စ်ဖိတ်အား ဝမ်းလျှောခြင်း ကုသမှုတွင် အူအတွင်းလှုပ်ရှားမှု နှင့် အူလမ်းကြောင်းမှ ဝမ်းတို့ဖြတ်သန်းမှုကို နှေးစေရန်သုံးသည်။ ယင်းသည် ကိုယ်အတွင်းသို့ ရေကိုပြန်လည်စုပ်ယူရန် အချိန်ကို ပိုပေးစေ၍ ဝမ်းအားပိုမာစေပြီး၊ လျော့၍ သွားစေရန်ဖြစ်သည်။
Cochrane (ကိုချရိန်း) နည်းစနစ်တကျပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုမှ ဇင့်ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းသည် ကလေးများအား ဝမ်းလျှောခြင်းမှ အကျိုးရှိစေသော်လည်း ယင်းမှာ ခြောက်လအထက် ကလေးပေါက်စများတွင်သာ ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ ဇင့်အတွက် လမ်းညွှန်မှုကို ထောက်ခံမှုပြုသော်လည်း အလွန်ငယ်သူများတွင် မတွေ့ရပေ။
၂၀၀၄ တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အကြမ်းအားဖြင့် ၂.၅ သန်းသောသူတို့ ဝမ်းလျှောခြင်းရောဂါ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အသက်ငါးနှစ်အောက် ကလေးများတွင် ၁.၅ သန်းသေဆုံးစေခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှ တဝက်ကျော်မှာ အာဖရိက နှင့် အာရှတောင်ပိုင်း ဒေသများတွင် ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုမှ တစ်နှစ်လျှင် လူ ၅မီလီယံ သေဆုံးနှုန်းမှ လျော့နည်းခဲ့သည်။ ဝမ်းလျှောခြင်းရောဂါသည် ထိုအသက်အုပ်စုတွင် အဆုတ်ရောင်ခြင်း (၁၇%) ပြီးလျှင် ဒုတိယ အများဆုံး သေဆုံးစေမှုအကြောင်း (၁၆%) အဖြစ်ရှိနေသေးသည်။
↑ GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators (October 2016). "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015:asystematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015". Lancet 388 (10053): 1545–1602. doi:10.1016/S0140-6736(16)31678-6. PMID 27733282.
↑ GBD၂၀၁၅ ခုနှစ်သေဆုံးမှုနှင့်သေစေနိင်သည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအကြောင်းရင်းများ (October 2016). "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးသားသက်တမ်းအများအားဖြင့် သေဆုံးမှုနှင့်သေစေနိုင်သော အကြောင်းရင်း ၂၄၉ ခုကြောင့်သေစေနိုင်သောအကြောင်းအရင်း၊ ၁၉၈၀-၂၀၁၅၊". Lancet 388 (10053): 1459–1544. doi:10.1016/s0140-6736(16)31012-1. PMID 27733281.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝမ်းလျှောခြင်း&oldid=703508" မှ ရယူရန်